Fahad Yaasiin: Barashaa Kuugu Dhimman!-Maqaal. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
AFEEF:-Aragtida uu qoraalkani Xambaarsanyahay waa mid ugaar ah qoraaga ku saxiixan.Sinaba oogama tarjumayso siyaasada guud ee Shabakada warbaahinta Feer-feer Media Network(FMN).
Soomaalida waxay Tiraahdaa ,“Ruuxa aad Barashadiisa Rabtid Jabad la Xaaro, Jadiin la Cun ama Jid la mar”. Sidaa darteed murtidaan waxay Tilmaameysa sida banii-aadamka lagu ogaan karo Dabeecadihiisa Xumaan iyo Samaan markaad la Daristo, Safar wada gashaan, ama Cunto Wadaagtaan sidaa darteed Maalin uun la wadaag in aad Wada shaqeysaan Fahad Yaasiin markaas baa wax badan ogaan doontaa.
Qoraalada kale ee aan ku Xasuusto Fahad Yaasiin waxaa ka mid ahaa Qoraaladii uu ku taageerayey Samzam Axmed Ducaale oo ah Gabar Soomaaliyeed oo lagu xirey Somaliland wuxuuna Qoramadii uu ka qorey ugu magacdarey “ XAALADDA SAMSAM IYO DAMIIRKA SHACABKA SOOMAALILAND” Qoraalada kale ee aan Xasuusteyda ka go’in ee aadka ii soo jiitey waxaa ka mid ahaa mid uu ugu magacdarey “SHACABKA SOOMAALIYEED: RABBI AYAA U MAQAN EE RAG UMA MAQNA”.
Fahad Yaasiin oo dhawaan Siyaasada ku soo biirey markaad Akhriso Qoraaladiisa Faraha badan waxaa kuu soo baxaya sida uu yahay, isla markaana uu Miisaan Culus u Leeyahay sidaa darteed waxaan aad uga amaanayaa Siyaasada Degen ee Qunyar Socodnimada ee aan Qofna ka Xanaajineyn, Xilkasnimada, Degenaanta, Aaamusnaanta,Gacan siinta Bulshada Soomaaliyeed waxaana leeyahay Dadka Aflagaadeeya Fahad Yaasiin in ay ka waantoobaan maadaama uu leeyahay dabeecadahaas aan kor ku soo sheegney Soomaalida waxay Tiraahdaa,“BARASHO HORTEED HA I NICIN”.
Previous Previous post: Shirweynihii Muqdisho Oo Lasoo Gabagabeeyay.
Next Next post: Cumar Cabdicasiis:Hogaamiye Dhab Ahaa oo Xukunkiisii Lagu Diirsaday-Maqaal.